Ikopi yeApple Macbook ene-Android 4.0 | I-Androidsis
Mailen bravo | | Ezinye izixhobo, Tutorials, Iinguqulelo ze-Android
Android Kukhuphiswano ngqo ne-iOS, inkqubo yokusebenza ephathekayo yezixhobo ze-Apple iPhone kunye ne-iPad. Kwaye enye yezona zinto zinomdla kakhulu kolu khuphiswano yinto yokuba abaphuhlisi benkampani yesithathu kufuneka basebenzise uyilo kwaye bazikope, kodwa ukuya kumda wokungaxelwa ukukopa. Kutheni le ntetho imfutshane? Kungenxa yokuba ngexesha lobulungisa beComputex, imodeli efanayo neLaptop yeMacBook yeApple yavela, kodwa isebenza nge Iqonga leSandwich Ice.
Imodeli ibizwa ngokuba yi-THD N2-A kwaye ixabisa ngaphantsi kweedola ezili-150 ukuba ithengwe ngobuninzi, ke yindlela efanelekileyo yokuqokelela abahlobo kunye nosapho ukuba bathenge uninzi lwababaphuhlisi baseAsia baqala ukuthengisa iimodeli kumaqonga onke kwi-Intanethi.
Ngaphandle kokuba ikopi ye I-Apple MacBook, i-THD N2-A ineempawu ezithile ezizodwa, ezisenza siqonde ukuba yimodeli enamabhongo kunokuba inokubonakala ngathi injalo kwasekuqaleni, nangaphandle kokusondela kwiimpawu ezinamandla ezinikezelwa yiApple.
I-THD N2-A yi Ilaptop ye-Android Isikrini se-LED esine-intshi engama-13'3. Intliziyo yencwadana yokubhalela yi-8 Ghz ARM A1,2 processor, 1 GB ye-DDR3 yohlobo lwe-RAM kunye ne-8 GB yememori yokugcina idatha.
Ngokwezonxibelelwano, ilaptop ye-THD N2-A inezibuko le-HDMI, imakrofoni, iWiFi kunye namazibuko aliqela e-USB 2.0. Ngokubhekisele kwiimpawu zonxibelelwano, inekhibhodi epheleleyo yeQWERTY kunye nephedi yokuhambahamba phakathi kwescreen kunye nokusetyenziswa okungafaniyo kunye neenkqubo esinokuthi siqhubeke nazo ngenxa yenguqulo ye-Android 4.0: Ice Cream Sandwich.
Okwangoku akukho siqinisekiso se Uhlaziyo lwe-ICS ukuba ilaptop iya kuba nayo, kwaye nokuba luhlobo lwenkxaso, kodwa ngokuqinisekileyo idatha eyahlukileyo iya kuqala ukubonakala igqibezela ukungqinisisa yonke idatha yeempawu zenkqubo yokusebenza.
Ngokumalunga noyilo, utshintsho olubalulekileyo lelo qhosha le-cmd, uphawu lwe-Apple, kwiwindows yeWindows. Kungenxa yokuba ilaptop yimbini-ebhuthini, ngenxa yokuba ezinye zeemodeli ze-THD N2-A zine-processor ye-ATOM ye-dual-core, ekwazi ukuqhuba inkqubo yokusebenza yeWindows kunye nohlobo oluthile lwe-Android 4.0.
Ucinga ntoni ngale modeli yahlukileyo ekopa ukubonakala kwayo kwangaphandle kwiMacBook Air?
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ii-Chromebook ziyafikeleleka ngakumbi
Ikhonkco - Engadget
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » I-THD N2-A, ikopi yeMacBook ene-Ice Cream Sandwich
Ukubulisa. Ngaba kukho ukubakho kokufumana isicwangciso sedigital software ye-Android ..? Into efana ne-AutoCAD yeWindows
UCarlos Andres Viteri sitsho
Ndayifaka i-Android ICD kwi-netbook yam, i-2GB ye-RAM, i-Intel Atom 1,5GHz isiseko esiphindwe kabini, i-320GB yokugcina, i-10,1 ″ 1366 × 768, andiyithandi ngokwenene, isebenza ngcono ngetouch screen, kunye andikwazi Khuphela iifayile kwimemori ye-USB ngokulula njengoko ndiyifakileyo njenge-OS ephambili kwakungekho enye i-OS, kuye kwafuneka ndibeke i-Ubuntu Live USB ukungena nge 'sudo nautilus' ukuze ndikwazi ukuhambisa iifayile. Andizukuyithenga ukuba ayibambeki.
Phendula uCarlos Andres Viteri
Uyifaka njani i-APK's kwiWindows usebenzisa umatshini obonakalayo kunye ne-Android SDK